XOG: Roobow & Farmaajo oo Kulmay & Qorshihii Abuu Mansuur oo la aqbalay – XAMAR POST
Wararka naga soo gaaray Villa Somalia, ayaa sheegaya in Hogaamiye ku­xigeenkii hore ee maleeshiyaadka Al­shabaab Sheekh Mukhtaar Roobow (Abuu Mansuur) uu kulan saacado qaatay la yeeshay Madaxweynaha Somalia Maxamed C/llahi Farmaajo.
Mukhtaar Roobow oo horay ula kulmay mas’uuliyiin dhowr ah oo ka tirsan dowlada ayaa iminka Madaxweynaha Somalia Maxamed C/llahi Farmaajo ka dalbaday in laga cafiyo wixii danbiya ee uu horay u geystay.
Mukhtaar Roobow ayaa Madaxweynaha u sheegay inuu ka towbad keenay dagaalkii uu kula jiray dowlada Federaalka, waxa uuna codsaday inaan loo qaban wixii ficil ah ee horay uga dhacay.
Abuu Mansuur waxa uu Madaxweyne Farmaajo u cadeeyay inuu la shaqeyn doono dowlada Federaalka isla markaana dhinac ka raaci doono dadkiisa Soomaaliyeed bacdamaa uu kasoo baxay Al­shabaab.
Ilo ku dhow dhow Xafiiska Madaxweynaha ayaa sheegay in Madaxweyne Farmaajo uu aqbalay dalabka Mukhtaar Roobow, balse waxa uu dul dhigay amar ah inaanu sameyn karin talaabo uusan fasax uga heysan mas’uuliyiinta gacanta ku heysa.
Mukhtaar Roobow waxa uu intaa kadib Madaxweynaha macluumaad kasiiyay heerka uu gaarsiisan yahay hamigiisa ku aadan difaaca dalka iyo inuu la dagaalamo maleeshiyaadka Al­shabaab.
Waxa uu Roobow u cadeeyay Madaxweynaha inuu wakhti badan siin doono la dagaalanka Al­shabaab, balse uu doonaayo inuu garab ka helo dowlada Federaalka.
Madaxweynaha waxa uu Roobow ka aqbalay inuu difaaco dalkiisa, balse la doonaayo in marka hore la helo jawi sahli kara in loo duulaantago goobaha ay iminka ku sugan yihiin Shabaabka.
Madaxweyne Farmaajo ayaa kulan labaad u qabtay Mukhtaar Roobow, oo la filaayo in dowlada Federaalka uga faa’iideeyo macluumaadka ku saleysan Al­shabaab.
Ma cadda xiliga uu noqon doono kulanka labaad ee dhexmari doona Madaxweynaha iyo Sheekh Mukhtaar Roobow.
XOG DEG DEG AH: Beesha Habar Gidir oo Shir Xasaasi ah Muqdisho uga socdo